Versjon: somali. Ku soo dhowaada wadahadalki ugu horreeyay ee xannaanada carruuurta - PDF
Download "Versjon: somali. Ku soo dhowaada wadahadalki ugu horreeyay ee xannaanada carruuurta"
1 Versjon: somali Warqad casumaad ah Ku soo dhowaada wadahadalki ugu horreeyay ee xannaanada carruuurta Ku socota waaliddiinta Waxaan doonaynaa in aan idinku casunno wadahadalki ugu horreeyay ee ka dhaca halkan xannaanada carruurta. Waxaan doonaynaa in aan qoys ahaan idin baranno. Waxaad fursad u helaysaan in aad su aalo na weydiisaan, waxaanan kala caddayn karnaa waxyaalaha aan idinka filayno iyo kuwa aad naga filaysaan. Waxaan jecel nahay in aad labadiinnuba wadahadalka u timaaddaan haddii ay taasi suurtaggal idiin tahay. Taariikh: Saacad:. Inta uu wadahadalku socdo waxaan ka hadli doonnaa mawduucyada hoose, waxaanan doonaynaa in aad kuwan horey uga sii fikirtaan: Sidee ayaa loo hubin karaa billowga ugu fiican ee suuraggalka ah ee xannaanada carruurta? Qoyska ilmaha (shakhsiyaadka ilmaha muhiimka u ah) Wakhtiga ugu horreeya (uurka, xilliga ilmuhu saqiirka yahay) Korriinka ilmaha Ammaan iyo isku-xirnaan Waxyaalaha laga filayo xannaanada carruurta Wixii layska kaashan karo? Mahadsanidiin
2 WADAHADALKA BILLOWGA AH EE ILMAHA KU CUSUB XANNAANADA CARRUURTA (wejiga 2-aad waxaa qabanaya madaxa barbaarinta) Hadaf: * In lays barto ilmaha iyo qoyska. * La wadaago khibradihii billowga laga kororsaday. Aad ayay ilmaha yaryar muhiim ugu tahay in billowga xannaanada carruurtu sida ugu wanaagsan ee suuraggalka ah uu u noqdo carruurta, waalidka iyo shaqaalaha intaba. Wakhtiga kulanka waalidka ayaa lagala heshiinayaa inta lagu jiro muddada billowga ah (ugu danbayn maalmaha ugu horreeya). Taariikhda wadahadalka waalidka: Magaca ilmaha: Waalid (mas uul): Walaalo: Yaa yimid wadahadalka: Goorma ayuu ilmuhu billaabay: Taariikh dhalasho: DARYEEL GOOR HORE Hadda ka hor ilmaha ma lagu daryeeli jiray meel guriga ka baxsan? Haddii haa: Sidee ayuu ilmuhu halkaas ula qabsaday? Sidee ayuu ilmuhu ula qabsaday dadka waaweyn? Sidee ayuu ilmuhu meesha uga helaa? XAALADDA QOYSKA Yaa loo arkaa xubnaha qoyska ee ugu sokeeya? Hooyo, aabbe walaalaha, waalidka kuwii dhalay, waalidka kuwa ay is-qabaan iyo kuwaa carruurtooda? 2
3 Ma jiraan dad uu ilmuhu si gaar ah ugu xiran yahay oo aan qoyska soke ahayn? Xaalado khaas ah oo guriga ka jira oo ay tahay in ay shaqaalaha xannaanada carruurtu ogaadaan miyaa jira? Yuu ilmuhu la nool yahay? Haddii ay jirto: Yay saaran tahay mas uuliyadda waalidnimo /daaryeelka maalmeed? Yaa loo baahan yahay in ay xannaanada carruurtu warbixin siiso? Haddii aanay waalidku wada noolayn sidee ayay u qaybsadaan wakhtiyada ay ilmaha la joogaan? Yaa xannaanada carruurta u soo sheegaya wixii is-beddel ah? WAXYAALO ILMAHA KU SAABSAN WAX ISUGU DUBARIDID BARAATIKO AH Ilmahaaga/ilmihiinna nooga sheekee. Ama: Sidee ayay waalidku ilmaha u arkaan? Isticmaal shan erey oo ilmahaaga sharraxaya! (sifo) DABEECADIHIISA CUNTADA (xannaanada carruurta ayaa cuntada ka sheekaynaysa deeqda cuntada) Alleerjig? Wax gaar ah oo uu ilmuhu jecel yahay / wax aanu jeclayn? Ilmaha wax cuniddiisu waa sidee? Ma jiraan waxyaalo ay waalidku dalbanayaan? HURDADA/NASASHADA Ilmuhu maalinti ma seexdaa, in intee le eg ayuu seexdaa? Ilmuhu ma isticmaalaa boombale, cinjirka masaasadda caanaha ilmaha lagu siiyo 3
4 iwm? Ilmuhu ma u bartay in uu dibedda/gudaha seexdo? Waxyaalaha ay xannaanada carruurta/waalidku doonayaan ee la xiriira qalab iyo dhar la dhigo xannaanada carruurta? HAGAAJIN/ISTICMAALKA XAFAAYADDA Ilmuhu tuunji/musqul ma isticmaalaa? Ilmuhu ma u bartay wakhtiyo go an oo wax la qabto? Ma jiraan waxyaalo ay waalidku dalbanayaan? FIRFIRCOONIDA/CAADOOYINKA Firfircoonida uu ilmuhu jecel yahay/aanu jeclayn. Hababka uu u fal celiyo? (eeg meesha looga hadlayo muujinta dareenka) LUUQADDA Ereyada iyo uraahda uu ilmuhu isticmaalo. Muxuu ilmuhu fahmaa, xaaladahee ayuuse gartaa? (Tusaale bixi) CAAFIMAAD Cudurro hore? Xeerarka taxaddarka ee xannaanada carruurta. Borogaraamka tallaalka ma la raacay? WIXII LIFAAQ AH EE LA SOCDA CODSIGA XANNAANADA CARRUURTA Waxaa qoray? Sabab: 4
5 KU SAABSAN SANADKII KOOWAAD EE NOLOSHA ILMAHA Sidee ayaad u aragteen korriinka ilmaha? - jir ahaan - bulsho ahaan - xagga madaxbannaanida marka la eego Sidee ayuu adiga/adinka iyo ilmaha xaalkaagu/xaalkiinnu ahaa? Dhacdooyin gaar ah oo la xiriiray in ilmo idiin dhasheen miyaa jiray? Uurku sidee buu ahaa? Muddadi u horreysay markaad ummushay kaddib sidee bay ahayd? Sidee loo qaybsaday wakhtigi fasaxa? Jirro intii ilmuhu yaraa? Khabiir takhasus leh ma la socday? Daaweyn? Dhibaato gaar ah oo xagga daawada ah hadda? (Eeg meesha looga hodlayo cuntada) WADASHAQAYNTA RUGTA CAAFIMAADKA Sheeg runta caafimaadka ee aad ku xiran tihiin. Ma jiraan wax ay rugta caafimaadku ilmaha kala shaqaysay? KEENISTA/QAADISTA (xataa wejiga 3-aad) Sideed u aragtaan keenista iyo qaadista ilmaha ee xannaanada carruurta? Sidee ayay shaqaaluhu subixii idiin soo dhoweeyaan? Sideed u aragtaan in aad ilamaha uga tagtaan xannaanada carruurta? Yaa ilmaha ka kaxayn doona xannaanada carruurta? 5
6 Muxuu ilmuhu sameeyaa marka ay waalidku ka tagaan? Maxaan qaban karnaa si ay ismacsalaamayntu ugu dhacdo sida ugu wanaagsan ee suuraggalka ah? FIRFIRCOONI, CIYAAR IYO ISLA-QABSI AMMAAN IYO DAREEN (xataa wejiga 3-aad) Isla-qabsiga ilmaha firfircooni noocee ah ayay waalidka iyo ilmuhu maalintii wada qabtaan? Ilmuhu calaamado toos ah ma bixiyaa ma fududdahay in la fahmo waxa uu ilmuhu leeyahay/rabo? Ilmuhu baahidiisa ma sheegtaa? Dareen sidee ah ayuu ilmuhu maalintii isticmaalaa/muujiyaa? (niyadjab, farxad, cabsi, qajilaad, welwel iwm.) Sidee ayuu ilmuhu u muujiyaa in uu faraxsan/maqsuud yahay? Sidee ayuu noqdaa ilmuhu marka uu ku jiro xaalado ammaan ah iyo kuwo aan ammaan ahayn? Sidee ayuu noqdaa ilmuhu marka ay waalidku ka tagaan? Ilmuhu ma u bartay dad aanu aqoon? Ilmuhu ma u bartay in ay hayaan dad kale oo waaweyn? (saaxiibbo?) Maxaad samaysaa/samaysaan marka uu ilmuhu u baahan yahay in loo laabqaboojiyo? marka aanu ammaan dareemayn? Ma jiraan wax uu ilmuhu ka baqayo ama wax kale oo ku adag? 6
7 Ma jiraan wax adiga/adinka dhib kugu/idinku ah? WADASHAQAYN IYO WAXYAALAHA LA FILAYO Waxyaalaha kale aad u aragto/aragtaan in ay muhiim yihiin in laysku wargeliyo? (tusaale ahaan: caadooyin, dhaqan iwm.) WAXYAALAHA LA FILAYO Maxaa muhiim idiin ah in ay xannaanada carruurtu ka taxaddarto? Maxaa muhiim u ah wadashaqaynta ka dhexaysa guriga iyo xannaanada carruurta? Dhererka maalmaha ilmuhu waa intee? Sidee ayaad u aragtay/aragteen wadahadalka? 7
8 GABAGABO/SOO KOOBID Mustaqbalka iyo waxa dhici doona Saxiixa xannaanada carruurta Saxiixa waalidka/mas uulka ilmaha Boggan inta la buuxbuuxiyo ayaa nuqul waalidka la siinayaa 8
9 Wax aad ka welwelsan tihiin? Wadashaqaynta gurigaxannaanada carruurta BKa helidda ilmaha sideed u aragtaan? Wax aad doonaysaan in aad nala soo qaaddaan? Sharraxaadda imahaaga Sanadki koowaad ee nolosho, wax dhib ah? Jawiga, Waxyaalaha la xiiseeyo, dabeecadda? KU Ku soo soo dhowaada wadahadalka waalidka! Wakhtiga: 9
10 FOOMKA QIIMAYNTA (wejiga 3-aad) Foom su aalo ah oo waalidka la siinayo dhawr maalmood wadahadalka ka hor. Waalidka / dadka mas uulka ka ah Waxaa lagu casumayaa wadahadal la socosho ah maalinta / saacadda: Waxaan doonaynaa in aad su aalahaan horay uga sii fikirtaan oo aad ka jawaabtaan. Foomka waxaa la soo xaraynayaa ugu danbayn maalinta uu wadahadalku dhacayo. Sidee ayay ahayd muddadi ugu horreysay xannaanada carruurta? Sidee ayaa laydiin qaabbilay? Ka warrama sidii aad u kala barateen kooxda shaqaalaha? Xiriir noocee ah ayaad la leedahay/leedihiin xiriiriyihiinna (primærkontakten) (haddii aad xiriir la leedihiin)? Dadka waaweyn ma yihiin kuwo ilmaha u heellan? Waa sidee keenidda iyo qaadista maalin walba? Warbixinno kugo/idinku filan ma ka heshaan xannaanada carruurta? Haddii aadan/aydnaan ka helin maxaad tabaysaa/tabaysaan? Ka helidda iyo ammaanku waa muhiim Sidee ayaad u aragtaa ka helidda iyo ammaanka ilmahaaga? Ilmuhu subixi isagoo ku faraxsan ma aadaa xannaanada carruurta? Baahida ilmaha wax ma laga qabtaa? Waa sidee nidaamka hurdada, wax cunidda iyo beddelidda xafaayadda? 10
11 Warbixin kugu filan ma lagu siiyay intaan la furin xannaanada carruurta? Haddii aadan/aydnaan ka helin maxaad tabaysaa/tabaysaan? Waxyaalo kale oo aad doonayso/doonaysaan in aad nala soo qaaddo/qaaddaan? 11
12 WADAHADALKA WAALIDKA SU AALO KU SOCDA WAALIDKA DHAWRKA LUUQADOOD KU HADLA FG! Haddii turjubaan loo baahan yahay sheeg wakhti fiican wadahadalka ka hor. Haddii aadan hubin, waxaa kuu fiican in aad turjubaan ballansato. Magaca ilmaha: Taariikh dhalasho: Ku dhashay: Turjubaan ma loo baahan yahay? Haa Maya Luuqad/lahjad: Magaca hooyada: Magaca aabbaha: Waddanka ay u dhalatay: Waddanka uu u dhashay: Taariikhda wadahadalka: Goobjoog: LLUQAD 1. Luuqadda hooyo/lahjadda hooyo 2. Luuqadda hooyo/lahjadda aabbe 3. Afafkani ma yihiin kuwo la qoro? 4. Afkee ayay qoysku ilmaha kula hadlaan? Hooyo Luuqad hooyo Af-norwiiji Af kale: Aabbe Luuqad hooyo Af-norwiiji Af kale: Walaalo Luuqad hooyo Af-norwiiji Af kale: Qoyska intiisa kale Luuqad hooyo Af-norwiiji Af kale: 5. Afkee ayuu ilmuhu kula hadlaa? Hooyo Luuqad hooyo Af-norwiiji Af kale: Aabbe Luuqad hooyo Af-norwiiji Af kale: Walaalo Luuqad hooyo Af-norwiiji Af kale: 12
13 Qoyska intiisa kale Luuqad hooyo Af-norwiiji Af kale: Saaxiibbo Luuqad hooyo Af-norwiiji Af kale: 6. Hva heter følgende ord på deres morsmål? Velkommen! God dag/hei! Adjø / Ha det! Hva heter du? Jeg heter. Jeg liker deg. Jeg er sulten. Ja/Nei. Jeg vil ikke. Mamma Pappa Jeg må på do. Jeg har tissa. Jeg har bæsja. Jeg er tørst. 1,2,3,4,5 Er du trøtt? Er du lei deg? 7. Da dee ayuu ilmuhu ku billaabay af-norwiijiga? 8. Mararkee ayuu ilmuhu isticmaalaa afnorwiijiga? 8B. Afkee ayaad adigu/adinku dareentaa/dareentaan in uu ilmuhu inta ugu badan ku hadlo? 9. Sidee ayaad u aragtaa/aragtaan aqoonta ilmaha ee afka hooyo marka loo eego ilmaha ay isku da da yihiin? 10. Sidee ayaad u aragtaa/aragtaan afnorwiijiga ilmaha? 11. Ilmuhu ma leeyahay saaxiibbo ku hadla afkiisa hooyo? 12. Ilmuhu ma leeyahay saaxiibbo ku hadla af-norwiiji? 13. Ma jirtaa hees carruureed fudud oo aan baran karno oo luuqadda hooyo ee ilmaha ah? 13
14 MARKI HORE IYO HADDA 14. Xoogaa ka sheeg taariikhda qoyska adiga oo cuskanaya qodobbada soo socda: - Taariikh ka hor intaan Norway la imaan (korriinki bey adda ciyaarta, xaaladda degaanka, qoys, saaxiibbo, qaar kale dhacdooyin guriga ka dhacay, waxyaalo dhib ah haddii ay jiraan, waxyaalo murugo ku reebay oo uu ilmuhu la soo kulmay FG! Dadka oo idil lama soo kulmin!) - Geeddi/qax (guurguurid, muddada la joogay meelaha kala duwan, meesha iyo haddii xero qaxooti muddadii halkaas la joogay) - Ilmuhu ma ku noolaan jiray dalka asal ahaan laga soo jeedo? Haddii uu ku noolaan jiray, muddo intee dhan? - Xaaladda wakhtigan xaadirka ah (xaaladda oggolaashada joogitaan (status), hoy, shaqo). Ma jiraan waxyaalo/xaalado aad aamminsan tahay/tihiin in ay kugu/idinku adag yihiin? DHAQAN IYO DIIN 15. Ma jiraan waxyaalo gaar ah oo loo baahan yahay in aan tixgelinno marka la eego diinta, dhaqanka ama caadooyinka? 16. Maalmahee ayuu qoysku u dabbaaldegaa? Ma doonaysaan in kuwan xannaanada 14
15 carruurta looga dabbaaldego, sidee ayaase loogu dabbaaldegaa? Wax gacan ah oo aad adinku arrintaas ka geysan kartaan ma jirtaa? 17. Ma jiraan waxyaalo kale oo loo baahan yahay in aan tixgelinno / waxyaalo kale oo loo baahan yahay in aan ogaanno? Marka la eego raashin iyo dhar. 18. Firfircoonida ka dhacda xannaanada carruurta ma ku jiraan qaar aanu ilmuhu ka qaybqaadan karin? 15
16 SOO KOOBID IYO MUSTAQBALKA WAXA DHICI DOONA Goob/taariikh: Saxiixa mas uulka wadahadalka Nuqulka boggan ayaa waalidka la siinayaa 16
17 LIISKA QALABKA (waxaa la qaybinayaa billowga) Waa in aad wadataa: Quraac u gaar ah haddii aanu ilmuhu guriga ku soo quraacan waxaa kale oo jira in xannaanooyinka carruuraha qaarkood carruurta laga siiyo cunto/cabbitaan, meesha qaar kale carruurta looga baahan yahay in ay dhammaan iyagu soo qaataan. Xafaayado Kareemka qorraxda/qabowga Kabaha gudaha lagu joogo Haddii uu ilmuhu ku seexanayo gaariga carruurta lagu riixo: suun, bustaha dhinacyada ka tolan ee carruurta la dhex geliyo (pose), bacda roobka, shandarawad. Haddii loo baahdo: boombale maro ah, cinjirka masaasadda caanaha ilmaha lagu siiyo, boombale iwm. Dharka hawada kala duwan Sarwaalka dheer ee hoosta laga gashado ee qaboobaha la qaato Sagsaan dhogor ka samaysan Sarwaal dhogor ka samaysan ama sarwaal layloon ah (fleecebukse) Funaanad dhogor ka samaysan ama mid layloon ka samaysan Buud dhaadheer oo goome ah Kabo xilliga lagu jiro ku habboon. Kabaha qaboobaha/kulaylaha Isku-joogga qaboobaha la gashado ama isku-joogga kulaylaha Sarwaal roob, jaakad roob Marada yar ee luqunta lagu duubto Koofiyaal (ku habboon hadba xilliga sanadka ee lagu jiro). Koofida qorraxda maalmaha ay qorraxdu kulushahay 2 joog oo gacmagashi ah Boorsada dhar-beddelashada ee ilmaha waa in ay ku jiraan: Sarwaalka dheer ee hoosta laga gashado ee qaboobaha la qaato Sagsaan Funaanad gacmagaab ah /funaanadaha gudaha looga xiro carruurta Kastuumo/nigis Sarwaallo Funaanado kuwa dhaxanta ah 17
Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2013 Årgang 96 Ny folkehelsemelding s. 2 3 Prosjektarbeid i tannhelsetjenesten s. 6 7 Tannvernseminar 2013 s. 16 19 Ny folkehelsemelding: God helse felles ansvar GOD